समाचार - फोटो मेशीनको लागि पानीमा आधारित मसी र तेलमा आधारित मसीको बीच के भिन्नता छ?
ठूलो ढाँचा प्रिन्टर
इको सोल्भन्ट प्रिन्टर
UV फ्लटबेड प्रिन्टर
उच्च बनानेवाला प्रिन्टर
झण्डा प्रिन्टि machine मेसिन
गृह-प्रयोग गरिएको कढ़ाई मेशीन
१ हेड इम्ब्रोइडरी मेशीन
२ हेड कढ़ाई मेसिन
Heads हेड कढ़ाई मेसिन
डेस्कटप काट्ने प्लटर
J- काट्ने प्लैटर
S- काट्ने प्लैटर
कन्टूर काट्ने प्लाटर
उच्च बनाउने ताप प्रेस
डबल स्टेशन गर्मी प्रेस मेशीन
*० * .०
*० * १००
१०० * १२०
क्याप गर्मी प्रेस मेशीन
मग गर्मी प्रेस मेशीन
प्लेट गर्मी प्रेस मेशीन
Heat मा १ तातो प्रेस मेशीन
1 मा १ कम्बो तातो प्रेस मेशीन
थ्रीडी उच्च बनाने की क्रिया भ्याकुम हीट प्रेस मेशिन
Color रंग र station स्टेशन स्क्रिन प्रिन्टिंग मेशिन
Color र color र station स्टेशन भर्नियर स्क्रिन प्रिन्टि machine मेशिन
तातो र चिसो ल्यामिनेट गर्ने मेशीन
सानो टुक्रा टुक्रा गर्ने मेसिन
YH360 laminating मेसिन
YH460 laminating मेसिन
YH650 टुकड़े टुक्रा मेसिन
तातो laminating मशीन
१00०० एच + +
चिसो ल्यामिनेट र काट्ने मेसिन
CO2 लेजर ईन्ग्रेभर र कटर
लेजर मार्किंग मेशीन
फाइबर लेजर इन्ग्रेभर र कटर
कार्ड र उपहार मेशीन
फ्ल्याटबेड तातो पन्नी मेसिन
पीवीसी कार्ड प्रिन्टर
कार्ड एम्बोसिंग मेशीन
फोटो पुस्तक म्यानुअल बनाउने मेसिन
एल्बम बनाउने मेसिन
फोटो-मेसिनको लागि पानीमा आधारित मसी र तेलमा आधारित मसीको बीच के भिन्नता छ?
तेलमा आधारित मसीले तेलमा रंगद्रव्यलाई पातलो पार्नु हो, जस्तै खनिज तेल, वनस्पति तेल, इत्यादि। स्याहीले तेलको प्रवेशद्वारा र प्रिन्टिंग माध्यममा वाष्पीकरण गरेर मध्यम पछ्याउँदछ; पानीमा आधारित मसीले पानीलाई फैलाव माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्दछ, र मसी प्रिन्टिंग माध्यममा हुन्छ पिग्मेन्ट पानीमा प्रवेश र वाष्पीकरण हुँदै माध्यममा जोडिएको हुन्छ।
फोटो उद्योगमा स्याही तिनीहरूको प्रयोगको आधारमा छुट्याईन्छ। तिनीहरूलाई दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ: एउटा हो, पानीमा आधारित मसी, जुन पानी र पानीमा घुलनशील सॉल्भेन्ट्सलाई रंगका आधारहरूलाई विघ्नको लागि मुख्य घटकहरूको रूपमा प्रयोग गर्दछ। अर्को तेल-आधारित मसी हो, जसले रंग-पानी विघटन गर्न मुख्य घटकको रूपमा गैर-पानी-घुलनशील सॉल्भन्ट्स प्रयोग गर्दछ। विलायकको घुलनशीलता अनुसार, तिनीहरू तीन प्रकारमा पनि विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो, रyeमा आधारित ईksहरू, जुन रyesमा आधारित छन्, हाल धेरै जसो इनडोर फोटो मेसिनहरू द्वारा प्रयोग गरिन्छ; दोस्रो, पिग्मेन्ट-आधारित स्याहीहरू, जुन पिग्मेन्ट-आधारित स्याहीमा आधारित हुन्छन् आउटडोर इंकजेट प्रिन्टरहरूमा प्रयोग गरिन्छ। तेस्रो, इको-सॉल्भन्ट मसी, बीचको कहीँ, आउटडोर फोटो मेशिनहरूमा प्रयोग गरिन्छ। विशेष ध्यान यी तीन प्रकारका मसीहरूलाई मिसाउन सकिँदैन। पानीमा आधारित मेशिनहरूले केवल पानीमा आधारित मसीहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्, र तेलमा आधारित मेशिनहरूले कमजोर विलायक ईन्क र सॉल्भन्ट ईंकहरू मात्र प्रयोग गर्न सक्दछन्। किनभने मसी मसी राखिएको छ जब कार्ट्रिज, पाइप, र पानी आधारित र तेल आधारित मशीनहरु को नोजल फरक छन्, तसर्थ, मसी लाई अन्धाधुन्ध प्रयोग गर्न मिल्दैन।
ईन्को गुणस्तरलाई असर गर्ने त्यहाँ पाँच मुख्य कारकहरू छन्: फैलाव, चालकता, PH मान, सतह तनाव, र चिपचिपापन।
१) डिस्पेरसन्ट: यो एक सतह सक्रिय एजेन्ट हो, यसको कार्य स्याही सतहको भौतिक गुणहरू सुधार गर्न, र मसी र स्पंजको आत्मीयता र वेट्याबिलिटी वृद्धि गर्ने हो। त्यसकारण, स्पंज मार्फत भण्डार गरिएको र सञ्चालन गरिएको मसीले सामान्यतया एक डिप्रेसेन्ट समावेश गर्दछ।
२) चालकता: यो मूल्य यसको नुन सामग्री को स्तर प्रतिबिम्बित गर्न प्रयोग गरीन्छ। राम्रो गुणस्तर मसीको लागि, नोजलमा क्रिस्टलको गठनबाट बच्न नुनको सामग्री ०.%% भन्दा बढी हुनुहुन्न। तेलमा आधारित मसीले पिग्मेन्टको कण आकारको आधारमा कुन नोजल प्रयोग गर्ने निर्णय गर्दछ। ठूला इंकजेट प्रिन्टरहरू १ppl, p 35pl, इत्यादिले कण आकारको आधारमा इंकजेट प्रिन्टरको शुद्धता निर्धारित गर्दछ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
)) PH मान: तरलको pH मान। अधिक अम्लीय समाधान, कम PH मान। यसको विपरित, अधिक क्षारीय समाधान, उच्च पीएच मूल्य। मसीलाई नोजल पोषण गर्नबाट रोक्नको लागि, PH मान सामान्यतया -12-१२ बीचको हुनुपर्दछ।
)) सतह तनाव: यसले मसीले थोप्लो बनाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर असर गर्न सक्छ। राम्रो गुणस्तर मसीमा कम चिपचिपेपन र उच्च सतह तनाव छ।
)) दृश्यता: यो प्रवाहको तरलको प्रतिरोध हो। यदि मसीको चिसोपन धेरै ठूलो छ भने, यसले मुद्रण प्रक्रियाको क्रममा मसीले आपूर्तिमा बाधा ल्याउनेछ; यदि चिपचिपापन धेरै सानो छ भने, मसी रंगको टाउको प्रिन्टिंग प्रक्रियाको बखत प्रवाह हुनेछ। मसी room--6 महिना सामान्य कोठाको तापमानमा भण्डारण गर्न सकिन्छ। यदि यो धेरै लामो छ वा वर्षाको कारण हुनेछ, यसले प्रयोग वा प्लगिंगलाई असर गर्दछ। मसीको भण्डारण प्रत्यक्ष सूर्यको किरणबाट बच्नको लागि छाप लगाउनु पर्छ। तापक्रम धेरै बढी वा कम हुनुहुँदैन।
हाम्रो कम्पनीले ठूलो मात्रामा इनडोर र आउटडोर मसीहरू निर्यात गर्दछ, जस्तै इको सॉल्भन्ट इंक, सॉल्भन्ट इंक, उच्च बनाने की क्रिया मसी, पिग्मेन्ट इंक र 50० भन्दा बढी स्थानीय गोदामहरू विदेशमा छन्। निर्बाध काम सुनिश्चित गर्न हामी तपाईंलाई कुनै पनि समयमा उपभोग्य वस्तुहरू प्रदान गर्न सक्दछौं। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् तपाईंको स्थानीय मसी मूल्यहरू प्राप्त गर्न।
पोष्ट समय: Dec-15-2020
न। State राज्य सडक, बाइमीबु सिउशुई औद्योगिक पार्क, १०6 राज्य सडक, रेन्ने टाउन, बैयु District जिल्ला, गुआंगजाउ, चीन।